We Fight We Win. -- " More than Media ": ဆလိုင်းယောအောင် အင်တာဗျူး
အိမ်ပြန်တဲ့ခရီးမဟုတ်ပါဘူး လို့ဆိုတဲ့ABSDF ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့် မေးခွန်း(၉)ခု
းရကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေတဲ့ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက် ABSDF ကျောင်းသား တပ်မတော် ဥက္ကဌ ကိုသံခဲအပါအ၀င် ထိတ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်(၁၀)ဦးမှာ ဒီဇင်ဘာ(၁၈)ရက်နေ့၌ ရန်ကုန်သို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲလေ့လာရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် ရောက်ရှိနေသည်။ အဆိုပါ ခရီးစဉ်အခြေ အနေ
“ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည့်ရဲ့စကားကွဲ့။ အစိုးရနောက်ကြောင်းပြန်လှည့် မလှည့်ဆိုတာလူထုအပေါ်မူတည်သတဲ့။ နောက်ကြောင်းလှည့်အောင်လည်း လူထုပဲလုပ်နိုင်သတဲ့။ နောက်ကြောင်း မလှည့်အောင်လည်း လူထုပဲလုပ်နိုင်သတဲ့။ မှတ်သားစရာပေါ့ကွယ်”ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်
အခုက ဒီမိုကရေစီ မရခင်ချုပ်ခဲ့တဲ့ စာချုပ်တွေကို ဒီမို ကရေစီခေတ်မှာ ပြန်ရှင်းရတာဆို တော့ နည်းနည်းတော့ အရှုပ်အရှင်း ရှိတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လိုလို ချင်ချင်နဲ့ပေးထားတဲ့ ကတိ ကိုယ့် ဘာသာကိုယ် လိုလိုချင်ချင်နဲ့ လုပ် ထားတဲ့ အလုပ်တစ်ခု သဘောတူညီ ချက်တစ်ခုကို ဖျက်ဆိုတာကတော့ အင်မတန်မှ စဉ်းစားချင့်ချိန်ရမယ့် ကိစ္စပဲ''ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောကြားခဲ့သည်။Daw Su said "we r now ဒီမို ကရေစီခေတ်.Do u agree or not.If u do not agree,u against Daw su
ဒီ အဖွားကြီးကို တနေ့ထက် တနေ့ ပိုရွံ့ရှာလာတယ်။ ကိုအောင်သူငြိမ်းထောက်ပြသလိုပဲ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ရော လွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပါ ဒီရခိုင်ကိစ္စမှာ သူမသိသေးရင် သိအောင်လုပ်ရမယ့် တာဝန်ရှိတယ်။ ကျမ ခြေခြေမြစ်မြစ်မသိလို့ ဝင်မပြောဘူး၊ ကြားနေပါတယ်ဆိုတာ ခေါင်းရှောင်တဲ့လုပ်ရပ်။ တာဝန်မယူရဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်။ သူရဲဘောကြောင်တဲ့စိတ်ဓါတ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ ခြေခြေမြစ်မြစ် မသိတဲ့အတွက် ကြားနေတယ်.
Daw Su..U r the real fucking idiot.U have courage but u dont know how to do politics.